‘भ्वाइस अफ नेपाल’ ले प्रतिस्पर्धीलाई १२ लाख भनेर ५० हजारमात्रै दियो! - Everest Dainik - News from Nepal
‘भ्वाइस अफ नेपाल’ ले प्रतिस्पर्धीलाई १२ लाख भनेर ५० हजारमात्रै दियो!
२०७६, ४ चैत्र मंगलवार
काठमाडौंः ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन–१ सकिएको २ वर्ष हुँदा पनि प्रतिस्पर्धीले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । ‘भ्वाइस अफ नेपाल’को पहिलो सिजनको अन्तिम ४ मा पुगेका श्रीजय थपलिया र सप्तक दूतराजले सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोजकप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । उनी दुवैले मंगलबार फेसबुकमा आयोजकको नाममा ‘खुल्ला–पत्र’समेत पोष्ट गर्दै गुनासो पोखे ।
अन्तिम चार प्रतिस्पर्धीको नाताले यी दुईले १६ डिसेम्बर २०१८ मा लागू हुने गरी व्यवस्थापन पक्षसँग सम्झौता गरेका थिए । १५ डिसेम्बर २०१९ मा समाप्त हुने यो सम्झौतापत्रको दोस्रो बुँदामा सम्झौता अवधिभर शीर्ष चारजनालाई काठमाडौंमा खाने बस्ने व्यवस्था आयोजकले नै गर्ने लेखिएको छ । काठमाडौंमा घर हुनेहरु पनि आयोजकले तोकेको स्थानमा नै बस्नुपर्ने र जे जति खर्च हुन्छ, त्यो सबै आयोजककै थाप्लोमा जाने उल्लेख छ । तर, आयोजकले खानेबस्ने व्यवस्था नगरेको श्रीजयको दाबी छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘भ्वाइस अफ नेपाल’बाट चर्चामा आएका सुशिल गर्तौलाको ‘पहिलो यो माया’ सार्वजनिक
दोस्रो बुँदामा मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब दिइने उल्लेख छ । त्यस हिसाबले १२ महिनाको १२ लाख आउनुपर्छ । तर, श्रीजय र सप्तकले अहिलेसम्म ५० हजार रुपैयाँमात्रै पाएको दाबी गरे ।
त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा प्रतिस्पर्धीहरुले सम्झौता अवधिभर वल्र्ड टुर गर्ने र त्यसबापत आउने रकमको ७० प्रतिशत आम्दानी प्रतिस्पर्धीकै हुने उल्लेख छ । तर, सप्तक र श्रीजयले बताए अनुसार उनीहरुले भोइसमार्फत् जम्मा दुई देशको भ्रमण गरे– युके र अष्ट्रेलिया । त्यहाँ प्रस्तुति दिएबापत् तोकिएको रकम अझै नपाएको उनीहरुको दाबी छ ।
आयोजक ‘भ्वाइस अफ नेपाल’का निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले पनि दूतावासमा पेश गर्नका लागि नक्कली सम्झौता पत्र तयार गरिएको आरोप स्वीकारे । ‘उहाँहरुको जुन पहिलो वास्तविक सम्झौता पत्र छ, त्यसमा माथि उल्लेखित कुनै पनि बुँदा समावेश छैनन् । मात्र कुनै कार्यक्रमको निश्चित प्रतिशत दिने भनिएको छ । यसमा मासिक तलबको कुरा गरिएको पनि छैन, उहाँहरुलाई बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइने भन्ने कुरा पनि छैन,’ पौडेलले भने, ‘श्रीजयले दूतावासका लागि बनाइएको नक्कली सम्झौता पत्रलाई फोटो खिचेर यसलाई नै बलियो आधार बनाएर कम्पनीलाई धोका दिइरहेका छन् । उहाँहरुको भिसा लागिरहेको थिएन । त्यसकारण मासिक कमाई यति धेरै राखिएको हो, खाने बस्ने व्यवस्था पनि आयोजकले नै व्यहोर्ने बताइएको हो ।’
याे पनि पढ्नुस को–को पुगे भ्वाइस अफ नेपालको ‘टप–८’ मा?
उनले सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको रकम दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘कुन चाहिँ कम्पनीले यस्तो विधि गर्न सक्छ ? यस्तो गरिए त कम्पनी टाट पल्टिहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले भन्नुभएको छ कि हामीलाई नीजि कार्यक्रम गर्न दिइएन । तर म उहाँहरुलाई सोध्न चाहन्छु कि उहाँहरुलाई कुन चाहिँ कार्यक्रम गर्न दिइएन ? करार अवधिमा हुँदा नै उहाँहरुले विज्ञापन दिने, प्रस्तुति दिने गर्नुभएको थियो । हामीले उहाँहरुसँग उक्त प्रस्तुतिको पैसा पनि मागेनौं ।’
याे पनि पढ्नुस राम लिम्बु बने दोस्रो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’
पौडेलले श्रीजयलाई जम्मा १०–१५ हजारमात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘ उहाँले दिएको प्रस्तुतिको रकम नकाटी हिसाब गर्दा कम्पनीले श्रीजयलाई १०–१५ हजार दिन बाँकी छ । प्रस्तुतिको हिसाब गर्दा त उल्टै श्रीजयले पैसा तिनुपर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘समस्या छ भने कानूनी उपचारतिर लाग्नुहोस् । हामीले आफ्ना सहभागीलाई विश्वास गर्दा धोका पाएका हौं । दूतावासका लागि नक्कली सम्झौता पत्र बनाउँदा यो उक्त प्रायोजनका लागि मात्रै बनाइएको सम्झौता हो भनेर अर्को पत्रमा पनि हस्ताक्षर गराउनुपर्ने रहेछ, हामीबाट यही गल्ती भयो ।’ रातोपाटी डटकमबाट
ट्याग्स: ‘भ्वाइस अफ नेपाल, श्रीजय थपलिया, सप्तक दूतराज
आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री बडू
मन्त्रिपरिषद बैठकद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित
नेपालले हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने
तुलसीपुर १५ जिताउन नसकेको भन्दै माओवादी वडा अध्यक्षले दिए राजीनामा
युक्रेन–रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्तन सक्छ : बाईडेन
श्रीलंका र डेनमार्कका लागि राजदुतको नाम अनुमोदन
शारदा ब्यारेजको पुल २४ सै घन्टा खुलाउन उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीसँग उद्योग वाणिज्य संघको माग
सेन्ट लरेन्समा ‘यौन दुर्व्यवहार’ प्रकरणः कोअर्डिनेटर रहेका गाेकुल वास्काेटाका मिडिया विश्लेषक पक्राउ